FBC - Piroojaktoonni humna meeggaa waatii kuma 1 ol maddisiisan sababa hanqina ‘faayinaansiin’ yeroo qabameef keessatti hin-jalqabamne
Piroojaktoonni humna meeggaa waatii kuma 1 ol maddisiisan sababa hanqina ‘faayinaansiin’ yeroo qabameef keessatti hin-jalqabamne
Finfinnee, Hagayya 07, 2009 (FBC) Bara bajataa darbe piroojaktoota humnaa meeggaa waatii kuma 1 ol maddisiisan ijaaruuf karoorfamus sababa hanqina ‘faayinaansiin’ hojiinsaa osoo hin-jalqabamnin akka jiru ibsame.
Ministeerri Bishaanii, Jallisii fi Elektirikaa akka ibsetti piroojaktoonni kunniin bishaan, aduu, qilleensaa fi urka lafa keessaa irraa maddisiisuuf yaadamee dhuma waggaa darbee fi jalqaba waggaa kanaatti ijaarsa isaanii jalqabuuf kan karoorri itti ba’e turani.
Ta’us hanqina ‘faayinaansii’ fi ‘kontiraaktaroota’ idil-addunyaa dorgomsiisuuf adeemsi caal-baasii yeroo dheeraa waan fudhateef haala karoorfameen jalqabamuu hin-dandeenye.
Daayirektarri Sab-quunnamtii ministeerichaa Obbo Buzunah Tolchaa akka ibsanitti ijaarsa piroojaktoota kanneenii Oromiyaa, Amaaraa, Kibba, Tigraayii fi Naannolee Somaalee Itiyoophiyaa keessatti geggeessuuf karoorfamee ture.
Bara 2010ttis haata’u sababuma hanqina ‘faayinaansiin’ piroojaktoota karoorfaman hunda jalqabsiisuun hin-danda’amu jedhaniiru.
Bara bajataa kana keessaa walakkaa jalqabaatti naannoo Tigraay Maqalee fi Humaraatti piroojaktoonni tokkoon tokkoon isaanii meeggaa waatii 100 maddisiisan nijalqabamu.
Naannoo Somaalee Itiyoophiyaatti madda annisaa meeggaa waaatii 120 Ayishaa Lama fi Naannoo Oromiyaatti Matahaaraatti maddi annisaa aduu meeggaa waatii 100 fi urka lafa keessaa Aluutoo Laangaanoo (boolli lama jalqabameef dabalataan boolli 24 ) hanga baatii Amajjiitti nijalqabamu.
Bara guddinaa fi Tioraansfoormeeshinii lammaattaa dhumatti hamma humnaa biyyattii meeggaa waatii 17, 347 ga’uuf karoorfamee hojjatamaa kan jiru yoo ta’u, amma kan jiru meeggaa waatii 4,315 ta’uusaa odeeffannoon ministeericha irraa aragame ni- eera.
Oduuwwan Biroo « Paartileen siyaasaa marii marsaa 3ffaa xumuruun, marii biraatif Fulbaanatti beellama qabatan	Godina Baaleetti qonnaan-bultoota 17,500 caalanii ragaan abbaa- lafummaa kenname »